Wararka - Huyssen sahayda korontada biyuhu ka ilaaliyaan oo leh PFC sare
Huyssen's PFC sahayda korontada ee aan biyuhu lahayn waxaa ku jira awood laga bilaabo 150 Watt ilaa 600W. Awoodda soo -saarku waxay noqon kartaa 5V, 12V, 24V, 30V, 36V, 48V, iwm. Waxaa lagu baakadeeyay xirmooyin adag oo biyo-mareen ah, boodh-ka-caag ah, aluminium shub ah oo lagu qiimeeyay IP67. Soo -gelinta iyo soo -saaridda waxaa la mariyaa qanjidhada fiilada ee la shaabadeeyey, isku -xireyaasha wareegsan ama isku -xirnaanta caadada ah. Guddiyada gudaha ayaa ah kuwo qallafsan oo la huwiyay si loogu difaaco heerarka naxdinta iyo gariirka.
Qaboojintu waa iyada oo loo gudbiyo gudaha derbiyada xayndaabka IP67-ka lagu qiimeeyo iyo iyada oo lagu saleeyo jiif dibadda ah ama derbiga golaha wasiirrada, iyada oo dheef dheeraad ah la mariyo dusha sare. Haddii lagu rakibo dusha kulaylka-qaboojinta, qaboojinta ayaa la sii wanaajiyaa oo baddelayaashu waxay gaaraan awood wax-soo-saar sare. Sahayda korontadu waxay leeyihiin qol madaxeed oo deeqsinimo leh waxaana lagu qiimeeyaa hawlgal ka sarreeya -25ºC illaa 50ºC kala duwan oo aan lahayn qiimeyn.
Sahayda korontadu waxay ku habboon tahay hawlgalka gaadiidka, warshadaha culus, nalalka LED, macdanta, milatariga, codsiyada badda iyo isgaarsiinta halkaas oo looga baahan yahay in laga ilaaliyo biyaha ka soo qulqulaya dayuuradaha xoogga leh, ciidda, boodhka birta, saliidda iyo waxyaabaha kale ee wasakhaysan. sifooyinka waa sida soo socota:
Shaqaynta danab galinta: AC110/220V, 50/60HZ
Danab -soo -saarka: 48V
Wax soo saarka Hadda: 20.8A
Awood soo -saarka: 500W
Qiimeynta biyuhu: IP67
Ilaalinta: Wareegga gaaban/Culeyska/Voltage -ka/Heerkulka ka sarreeya;
Naqshad aan biyuhu lahayn oo leh qiimeyn IP67, naqshad rakibaadda gudaha ama dibedda;
100% imtixaanka gubashada oo buuxa;
Ogolaanshaha CE RoSH FCC;
Xirmada waxaa ka mid ah: 1 x 48V 500W korontada darawalka korontada ee aan biyaha lahayn
beddelidda korontada hab hab, Led Strip Light Power Supply, Led Strip Light transformer, Awooda Korantada Dc, Awoodda Awoodda Isbeddesha, Awoodda Awoodda La -habeeyay,